ပြည်တွင်းကားများသည်ကိုယ်ပိုင်မောင်းနှင်မှုပြောင်းလဲခြင်းအတွက်သင့်တော်လိမ့်မည်။ | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး16 Bursaပြည်တွင်းမော်တော်ယာဉ်သည်ကိုယ်ပိုင်မောင်းနှင်မှုကိုပြောင်းလဲခြင်းအတွက်သင့်တော်လိမ့်မည်
21 / 01 / 2020 16 Bursa, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, မော်တော်ယာဉ်, တူရကီ, ဗွီဒီယို
အဆိုပါတွစ်တာအကောင့်မှတူရကီရဲ့ကား Initiative Group မှသစ်ကိုပြည်တွင်းမော်တော်ကားခွဲဝေမှုနှင့် ပတ်သက်. ခဲ့ပါတယ်။ ခွဲဝေမှုတွင်ဖော်ပြထားသည်မှာကားတွင်အခြေခံအဆောက်အအုံများရှိပြီးအင်တာနက်ပေါ်တွင်အဆင့်မြှင့် တင်၍ 'အဆင့် ၃ နှင့်အထက်' ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမောင်းနှင်မှုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်သည်။
2019 ခုနှစ်ရဲ့အဆုံးမှာတူရကီရဲ့ကား Initiative အဖွဲ့ (TOGG) ပြည်တွင်းမော်တော်ကားမြှင့်တင်ရန်ကြီးစိတ်လှုပ်ရှားစေသောခဲ့သည်။
SUV နှင့် Sedan အမျိုးအစားကွဲပြားသောကိုယ်ထည်ရွေးစရာနှစ်မျိုးနှင့်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
အဆိုပါတွစ်တာစာမျက်နှာဖွငျ့ TOGG ပုံရိပ်ကိုခွဲဝေမှု "ထောက်ခံမှုစနစ်များနှင့်အတူမြို့အသွားအလာအတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်အဆင့်မြင့် drive ကိုအတူလိုက်နာမှုအတွက်အင်တာနက်ကို '' အဆင့်3နှင့် ကျော်လွန်. '' ကျော်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမောင်းနှင်မှုပြောင်းလဲခြင်းတူရကီရဲ့ကားအဆင့်မြှင့်နိုင်ပါသည်နှင့်ရှည်လျားသောခရီး၏ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သက်သာစေနိုင်ကြောင်းပါလိမ့်မယ်" ဟုအဆိုပါကြေညာချက်ကဆိုသည်။
အိမ်တွင်းသုံးကားများ ၅ လုံးပါလိမ့်မည်
2022 ၏ယူရို NCAP5ကြယ်ပွင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံချိန်စံညွှန်းလုံခြုံစွာဌာနေİNTURKEYကားနှင့်အတူခရီးကိုခံစားယူပါလိမ့်မယ်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုအမြင့်သက်ရောက်မှုခွန်အားပြည့်စုံတက်ကြွစွာနဲ့ passive ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဒြပ်စင်များနှင့်အဆင့်မြင့်ယာဉ်မောင်းအကူအညီစနစ်များကို။
ဒီကိရိယာကိုအီတလီဒီဇိုင်းဗျူရို Pininfarina မှဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ရှေ့ပြေးပုံစံမော်တော်ယာဉ်များကိုအီတလီနိုင်ငံတွင်ထုတ်လုပ်သည်။
မော်တော်ယာဉ်ဒီဇိုင်းတွင်အင်ဂျင်နီယာ ၁၀၀ ကျော်ပါ ၀ င်သည်။ မော်တော်ယာဉ်၏ဘက်ထရီပလက်ဖောင်းသို့ပေါင်းစည်းထားသည်။ ၎င်းသည် Euro NCAP လေယာဉ်ပျက်ကျမှုစမ်းသပ်မှုမှကြယ် ၅ ပွင့်ရရှိရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါမော်တော်ယာဉ် 100 စံနှင့်5optional ကိုလေအိတ်ပါလိမ့်မယ်။ ပထမဆုံးထုတ်လုပ်မည့်မော်ဒယ်ကို C class SUV တစ်ခုဖြစ်ရန်စီစဉ်ထားပြီး ၂၀၃၀ တွင်မတူညီသောမော်ဒယ် ၅ မျိုးကိုထုတ်လုပ်မည်။ ယာဉ်၏ရှေ့ဘက်တွင် tulip motif များရှိသည်။
မော်တော်ယာဉ်၏တူရိယာ panel ကိုလုံးဝအီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်ပါဝင်ပါသည်။ panel တွင် display screen သုံးခုနှင့် ၁၀ လက်မ (၂၅.၄ စင်တီမီတာ) multimedia နှင့် navigation screen တို့ရှိသည်။ မော်တော်ယာဉ်တွင်ဘေးထွက်မှန်မရှိပါ၊ ကင်မရာများရှိသည်။
LOCAL CARS ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ
ဒီယာဉ်ကိုလီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ကီလိုမီတာ ၃၀၀ နှင့် ၅၀၀ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးရှိစွမ်းအင်သုံး pack နှစ်ခုကိုဘက်ထရီစွမ်းအားပေါ် မူတည်၍ တစ်ခုတည်းအားသွင်းနိုင်သည်။ မော်တော်ယာဉ်၏ဘက်ထရီကိုမိနစ် ၃၀ အောက်တွင် ၈၀% အားသွင်းရန်စီစဉ်ထားသည်။ မော်တော်ယာဉ်တွင်ပါ ၀ င်သည့်အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားသောဘရိတ်စနစ်အားအင်ဂျင်များနှေးကွေးစွာရွေ့လျားနေသော Dynamo ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ရန်နှင့်ဘက်ထရီကိုအားပြန်သွင်းခြင်းဖြင့်အကွာအဝေးကို ၂၀% အထိတိုးချဲ့ရန်စီစဉ်ထားသည်။
မော်တော်ယာဉ်ကိုအင်ဂျင်နှစ်မျိုးနှင့်ထုတ်လုပ်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ နောက်ကျောဘီးပါ ၀ င်သည့် HP ၂၀၀၊ လေးဘီးတပ်ထားသော HP ၄၀၀ ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအမြန်နှုန်းမှာ ၁၈၀ ကီလိုမီတာဖြစ်သည့်ယာဉ်၏အရှိန်မှာ ၄.၈ HP ဗားရှင်းနှင့် ၀.၁၀၀ ကီလိုမီတာ / နာရီအရှိန်မြှင့ ်၍ HP ဗားရှင်း ၂၀၀ တွင် ၄.၈ စက္ကန့်ဖြစ်သည်။
ယာဉ်သည်စက်ရုံမှ 4G / 5G အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုဖြင့်စက်ရုံမှနောက်ဆုံးသတင်းများကိုအလိုအလျောက်လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပြီးချွတ်ယွင်းပါကယာဉ်ကိုအဝေးမှရပ်တန့်နိုင်သည်။ ဒါဟာယာဉ်အဆင့်3ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမောင်းနှင်မှု features တွေရှိလိမ့်မည်ဟုရှင်းပြသည်။
2022, လမ်းပေါ်ရှိနေအိမ်များအတွက်၎င်း၏ကျယ်ပြန့်အားသွင်းအခြေခံအဆောက်အအုံမှကျေးဇူးတင်စကားလာရုံးများနှင့်လမ်းအပေါ်ဘူတာမှာတရားစွဲဆိုနိုင်ပါတယ်လိမ့်မယ်သည်အထိတူရကီရဲ့ကားပြန့်ပွား tOGGer ၏ခေါင်းဆောင်မှုပေးပါလိမ့်မယ်။ ချိတ်ဆက်ပြီး smart ကားဖြစ်ရန်နည်းပညာဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်အတူအသုံးပြုသူများသည်ကား၏အားသွင်းမှုကိုအလွယ်တကူစီစဉ်နိုင်သည်။
အဆိုပါမော်တော်ယာဉ်ကို ၂၀၂၀ တွင်တည်ဆောက်ရန်စီစဉ်ထားသောစက်ရုံတစ်ခုတွင်ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီး Burms ရှိ Gemlik ရှိတူရကီစစ်တပ်ပိုင်မြေပေါ်တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အပြီးသတ်မည်ဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးယာဉ်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင်တိပ်ခွေမှလွတ်အောင်စတင်ရောင်းချရန်စီစဉ်ထားသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၃၀ တွင်စုစုပေါင်း ၂၂ ဘီလီယံ TL ပုံသေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ၁၃ နှစ်အတွင်းပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ တစ်နှစ်လျှင်မော်ဒယ် ၅ စီးတွင်လူပေါင်း ၄၃၂၃ ဦး ကိုထုတ်လုပ်ရန်နှင့်မော်တော်ယာဉ် ၁၇၅၀၀၀ ထုတ်လုပ်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ အကောက်ခွန်အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်၊ VAT ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်၊ အခွန်လျှော့ချရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်အာမခံပရီမီယံထောက်ခံမှုနှင့်မော်တော်ယာဉ်အစီးရေ ၃၀ ၀ ယ် ၀ ယ်ယူရန်အတွက်နိုင်ငံတော်အာမခံချက်စသည့်ကွဲပြားခြားနားသောအခွန်အခများလျှော့ချခြင်း။ ပထမမော်ဒယ်တွင်ပြည်တွင်းအစိတ်အပိုင်းများ၏ ၅၁% မှမော်တော်ယာဉ်ကိုထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ဒုတိယနှင့်တတိယပုံစံများတွင်အိမ်အစိတ်အပိုင်းများ၏အချိုးကို ၆၈.၈% တိုးရန်ရည်ရွယ်သည်။
Salarh ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း Rize`N မြို့ပြေူပာင်းလဲရေးကိုအားထောက်ကူပါလိမ့်မယ်
ပြည်တွင်းလျှပ်စစ်ကားကီလိုမီတာလမ်း 500 ဖြစ်စေမည်
တူရကီ Avli Enhancer ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရယာဉ်
တရုတ်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ Trackless ရထားစမ်းသပ်ခံရ
ဥရောပရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရယာဉ်ပြိုင်ပွဲ Marc နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲစတင်
ရာသီအညီလုံခြုံစိတ်ချရသောမောင်းနှင်မှုများအတွက် Michelin ယာရွေးချယ်မှုအကြံပြု
Gebze စက်တင်ဘာလ 27 အတွက် YHT-Kosekoy ပထမဦးဆုံးကားမောင်းလိုင်း
20 1 500 ချွေမောင်းနှင်မှုမှတစ်ဆင့်နှစ်စဉ်ငွေစုအတွက်မြေအောက်ကီလိုမီတာယူရိုသန်း
ပြည်တွင်းမော်တော်ယာဉ်ယူရို NCAP စာမေးပွဲ